Olee otú iji tọghata / Ọkụ VOB ka DVD on Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata VOB ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Kọmputa gị na-stocked site VOB fim na chọrọ ọkụ ha ka ha DVD? Dị ka a nnyocha e mere site a software ụlọ ọrụ n'etiti 1000 ndị, e nwere 83% nke ha ga-ahọrọ iji tọghata VOB ka DVD. Ọfọn, ị nwere ike ndabere niile ọkacha mmasị gị VOB nkiri na hapụ gị Obodo disk ohere. Niile ị chọrọ bụ a VOB burner: Video Ntụgharị (Video Converter Ultimate for Mac), nke nwere ike inyere gị tọghata na ọkụ VOB faịlụ ka DVD magburu onwe video mma.
The n'okpuru ndu ewe DVD Creator maka Windows ihe atụ (Windows 10 gụnyere). Ịmepụta DVD si VOB na Mac (Mountain odum gụnyere) bụ fọrọ nke nta ahụ. Dị nnọọ jide n'aka na ị ga-esi nri version.
Free download VOB burner ike DVD si VOB faịlụ:
1 Ibu Ibu VOB faịlụ
Mgbe igba egbe a FLV ka DVD Ntụgharị, chọta "Ọkụ" menu> "Tinye Files" button mbubata FLV video faịlụ na hazie DVD ọdịnaya. Mgbe FLV video faịlụ na-kwukwara, nanị ịdọrọ na dobe ka ịhazie video iji.
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata VOB ka DVD na mpụga sobtaitel, ị nwere ike itinye ndị a ndepụta okwu formats: SRT, ịnyịnya ibu na SSA. Iji mee ya, dị nnọọ pịa "T" taabụ n'okpuru faịlụ ọmụma, wee họrọ "Tinye Ndepụta Okwu" Ibu Ibu gị ndepụta okwu.
2 Dezie VOB videos
Tupu converting FLV vidiyo na DVD, ọ bụ ịnara dezie Flash video. Ọ bụrụ na ị chọrọ, họrọ "Dezie" na-emeghe video edezi window. A dịgasị iche iche nke edezi ngwaọrụ na-wuru na: akuku, bugharia, watermark, mmetụta na na.
3 Ọkụ VOB ka DVD ma ọ bụ tọghata VOB ka ISO / DVD nchekwa
Ugbu a ịgbanwee gaa na "Ọkụ" taabụ. Jide n'aka a ide DVD diski e etinyere n'ime gị DVD mbanye. Ndabara nhọrọ bụ ọkụ VOB faịlụ ka DVD. Otú ọ dị, ị nwere ike họrọ ike a DVD nchekwa ma ọ bụ ISO Image faịlụ. Ndị ọzọ ntọala dị ka DVD labeelu, TV Standard, video àgwà, wdg na-nyere, Mgbe niile oke ntọala na-okokụre, See "Ọkụ" bọtịnụ na ala nri akuku nke window na-eme ka DVD si .vob. The akakabarede ga rụchaa na a obere oge ọ bụrụ na gị videos na-adịghị oke ibu. Tupu ọkụ, ị nwekwara ike ihuchalu ya site na ịpị Play akara ngosi.
Na ọrụ Wondershare VOB ka DVD onye (Windows 8 na-akwado), ị nwere ike mfe ime ka DVD si VOB faịlụ nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ a àgwà oge na-ekiri VOB nkiri na gị DVD ọkpụkpọ gị na ezinụlọ gị na ndị enyi ma ọ bụ zipu discs ha n'ihi na mma nkekọrịta .
Na-ere ọkụ VOB ka DVD Atụmatụ:
1. A VOB faịlụ bụ a akpa format na DVD-Video media nke e dere video, audio, sobtaitel, menu na navigation ọdịnaya. Ọ bụ isi ọdịnaya na a DVD nchekwa (VIDEO_TS na AUDIO_TS). Ọ bụrụ na ị ọkụ VOB faịlụ ka DVD na Mac, Mac Video Converter Ultimate nwere ike iṅomi gị Video_TS nchekwa ozugbo na DVD enweghị ihe ọ bụla nyopụta, nke pụtara na DVD faịlụ kere nke gị VOB faịlụ uche kpọmkwem otu àgwà.
2. VOB ka DVD burner na-enyekwa dị iche iche ịke nke DVD menus. Ọ bụrụ na ị ikwu ịhọrọ a menu n'ihi na gị DVD, software ga-emekwa ka a ndabere DVD menu maka gị. Ị nwere ike hazie DVD menu site na-agbanwe menu buttons, thumbnails, okpokolo agba, wdg ma ọ bụ họrọ "Ọ dịghị NchNhr" ka ọkụ VOB DVD enweghị menus.
Olee otú Detuo Chebe DVD na DVD Ada Ada maka Free